Farmaajo [Bidix], oo gacan-qaadaya Safiirka UAE ee Soomaaliya Al-Xamaadi [Midig]
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweyne Farmaajo ayaa kulan gaar ah xafiiskiisa Villa Soomaaliya kula yeeshay Safiirka dowladda Imaaraadka u fadhiya Muqdisho, Maxamed Axmed Cismaan Al-Xamaadi.
Kulanka ayay diiradda ku saareen arrimo dhowr ah, oo uu kamid yahay xoojinta xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka, si looga guul-gaaro iska-kaashiga danaha labada dal, oo xiriir qoto dheer oo taariikhi ah uu u dhaxeeyo.
Madaxweyne Farmaajo ayaa dowladda Imaaraadka iyo shacabkeeda uga mahadceliyay taageerada joogtada ah, ee ay la garab-taagan yihiin Soomaaliya oo dhinac walba leh, taasi oo ah lama iloobaan.
Safiirka oo dhambaal ayaa Farmaajo gaarsiiyay dhambaal uu uga wadey Madaxa ugu sareysa Imaaraadka, kaasi oo xambaarsanaa balan-qaadyo dhinacyo badan leh iyo inay xoojinayaan xiriirka dowladda Faderaalka.
Soomaaliya iyo Imaaraadka waxaa ka dhaxeeyay Xiriir ku qotoma dhaqanka, Diinta, Ganacsiga, amniga iyo Siyaasadda, inkastoo ay jiraan isku-dayo xubno katirsan dowladda Federaalka oo doonaya in xiriirka loo jaro UAE.
Markii Khilaafka soo kala dhex-galay dalalka Khaliijka June 5, 2017, dowladda Federaalka waxay qaadatey go'aan dhex-dhexaad ah, si ay u ilaaliso danaha uga xiran labada dhinac, inkastoo mowqifkaasi wali cadaadis kala kulmayso.
Imaaraadka Carabta ayaa shaaciyay inuu joojiyay taageeradii uu siin jiray Ciidanka...